October 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Christ Leo at 10:33:00 PM 0
Adobe Photoshop 2019 လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခြားSiteတွေမှာလုံးဝမရှိသေးပါဘူး။Creative Cloud လုံးဝ login ဝင်စရာမလိုသောRepack ရဲ့အရသာကိုအပြည့်အဝခံစားကြည့်ပါ။
Window 7SP1_x64, Window 10 Pro_x64 အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
အင်စတောအစအဆုံးအင်တာနက်မလိုသော Offline ဖြစ်ပါသည်။
ခရက်လုပ်စရာမလိုပါ အင်စတောပြီးလျင်ဆော့ဝဲဖွင့်၍အသုံးပြုနိုင်သောလိုင်စင်ဗားရှင်းကို ပြုလုပ်ထားသည့် အထူး Repack ဗားရှင်းဖြစ်ပါသည်။
အသစ်ပါဝင်လာသော Color Wheel မှအစ အမျိုးပေါင်း (၂၀) new feature များ
>>>>Download Photoshop CC 2019 Full Version<<<<
>>>>Download Using Photoshop CC 2019<<<<
Softwareကတော့ ဦးကောင်းမြင့် တင်ပေးထားတာပါ
Post By ရောင်ပြန်လေး(နည်းပညာ)
Networking Tool Oppo Tool
Maung Pauk at 11:06:00 PM 0
OPPO တွေအတွက် Network Unlock Tool ဖြစ်ပါတယ်.. ADB သိဖို့လိုပါတယ်..
အောက်ပါ Oppo Model များကို Support ပေးပါတယ်..
OPPO တှအေတှကျ Network Unlock Tool ဖွဈပါတယျ.. ADB သိဖို့လိုပါတယျ..
အောကျပါ Oppo Model မြားကို Support ပေးပါတယျ..
Full Version ရအောင်လုပ်နည်းကတော့
Full Version ရအောငျလုပျနညျးကတော့)...
1. ပထမဆုံး Antivirus ကို Disable လုပ်ပါ.. Setup ကို Install လုပ်ပြီးရင် GET Your HWID ကိုနှိပ်ပါ.. ဂဏန်းလေးတွေပေါ်လာပါမယ်.. Copy ကိုနှိပ်ပါ..
(1. ပထမဆုံး Antivirus ကို Disable လုပျပါ.. Setup ကို Install လုပျပွီးရငျ GET Your HWID ကိုနှိပျပါ.. ဂဏနျးလေးတှပေျေါလာပါမယျ.. Copy ကိုနှိပျပါ..)
2. Keygen ကိုဖွင့်ပါ.. ခုနက Copy ယူခဲ့တဲ့ ကီးတွေကို အပေါ်ဆုံးက အကွက်မှာ Paste ချပါ..
(2. Keygen ကိုဖှငျ့ပါ.. ခုနက Copy ယူခဲ့တဲ့ ကီးတှကေို အပျေါဆုံးက အကှကျမှာ Paste ခပြါ..)
3. ပြီးရင် Genrate Key ကိုနှိပ်ပါ.. အောက်ကအကွက်မှာ ကီးတွေပေါ်လာပါမယ်.. အဲဒီကီးကို Select လုပ်ပြီး Copy ယူပါ..
(3. ပွီးရငျ Genrate Key ကိုနှိပျပါ.. အောကျကအကှကျမှာ ကီးတှပေျေါလာပါမယျ.. အဲဒီကီးကို Select လုပျပွီး Copy ယူပါ..)
4. မူလဖွင့်ထားတဲ့ Network Unlock Tool ကိုပြန်သွားပါ.. ကူးလာတဲ့ ကီးကို Login ရဲ့ဘေးက အကွက်မှာ Paste ချပြီး Login ကိုနှိပ်ပါ.. ဒါဆိုရင် Oppo Network Unlock Tool ကိုသုံးလို့ရပါပြီ..
(4. မူလဖှငျ့ထားတဲ့ Network Unlock Tool ကိုပွနျသှားပါ.. ကူးလာတဲ့ ကီးကို Login ရဲ့ဘေးက အကှကျမှာ Paste ခပြွီး Login ကိုနှိပျပါ.. ဒါဆိုရငျ Oppo Network Unlock Tool ကိုသုံးလို့ရပါပွီ..)
Download OPPO Network Unlock Tool : 23.48 MB
Backup and Recovery Tutorial
Windows မတက်တော့အချိန်မှာ Data တွေ ဘယ်လို Backup လုပ်မလဲ
Maung Pauk at 9:13:00 PM 0
Hardware တွေက ကောင်းပေမယ့် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Windows မတက်တော့တဲ့အခါ Data တွေကို Backup လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
ကိုယ့်မှာ ရှိထားရမှာက Windows 10 DVD သို့မဟုတ် Windows 10 USB Bootable USB Drive ဖြစ်ပါတယ်..
(Hardware တှကေ ကောငျးပမေယျ့ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ Windows မတကျတော့တဲ့အခါ Data တှကေို Backup လုပျဖို့ နညျးလမျးတဈခု မြှဝလေိုကျပါတယျ..
ကိုယျ့မှာ ရှိထားရမှာက Windows 10 DVD သို့မဟုတျ Windows 10 USB Bootable USB Drive ဖွဈပါတယျ..)
၁. Windows တင်နဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း DVD သို့မဟုတ် Bootable USB Drive ကနေ Boot တက်ပေးရပါမယ်.. လုပ်နည်းကတော့ ကွန်ပျူတာ စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ F2 သို့မဟုတ် Delete Key ကိုနှိပ်ပြီး BIOS Setting ကိုဝင်ရပါမယ်.. (ကွန်ပျူတာ Brand အလိုက် BIOS Setting ကိုသွားရမယ့် Key ကွဲပြားပါတယ်.) ပြီးရင် Boot Tab မှာ 1st Boot ကို CD/DVD ကိုရွေးပေးရပါမယ်.. ကိုယ်က Bootable USB နဲ့တက်မယ်ဆိုရင် UEFI ကိုရွေးပေးရပါမယ်.. ပြီးရင် F10 ကိုနှိပ်ပြီး Enter တစ်ချက်ခေါက်ပေးရပါမယ်.. ပုံမှန်အတိုင်း Boot တက်လာပြီး အဆင့်ဆင့်သွားကာ Custom Install ကိုရွေးပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှာ Windows ကို Install လုပ်ဖို့ Partition ရွေးရတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ပါမယ်...
(၁. Windows တငျနဲ့နညျးလမျးအတိုငျး DVD သို့မဟုတျ Bootable USB Drive ကနေ Boot တကျပေးရပါမယျ.. လုပျနညျးကတော့ ကှနျပြူတာ စဖှငျ့ဖှငျ့ခငျြးမှာ F2 သို့မဟုတျ Delete Key ကိုနှိပျပွီး BIOS Setting ကိုဝငျရပါမယျ.. (ကှနျပြူတာ Brand အလိုကျ BIOS Setting ကိုသှားရမယျ့ Key ကှဲပွားပါတယျ.) ပွီးရငျ Boot Tab မှာ 1st Boot ကို CD/DVD ကိုရှေးပေးရပါမယျ.. ကိုယျက Bootable USB နဲ့တကျမယျဆိုရငျ UEFI ကိုရှေးပေးရပါမယျ.. ပွီးရငျ F10 ကိုနှိပျပွီး Enter တဈခကျြခေါကျပေးရပါမယျ.. ပုံမှနျအတိုငျး Boot တကျလာပွီး အဆငျ့ဆငျ့သှားကာ Custom Install ကိုရှေးပွီးနောကျတဈဆငျ့မှာ Windows ကို Install လုပျဖို့ Partition ရှေးရတဲ့အပိုငျးကိုရောကျပါမယျ...)
၂. ဒီတစ်ခါ ကီးဘုတ်ပေါ်က Shift ကီးကိုနှိပ်ထားရင်း F10 ကိုနှိပ်ပါ.. (အချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ Shift+Alt+F10 နှိပ်ရပါတယ်..) Command Prompt ပေါ်လာပါမယ်... အဲဒီထဲမှာ notepad လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..
(၂. ဒီတဈခါ ကီးဘုတျပျေါက Shift ကီးကိုနှိပျထားရငျး F10 ကိုနှိပျပါ.. (အခြို့ကှနျပြူတာတှမှော Shift+Alt+F10 နှိပျရပါတယျ..) Command Prompt ပျေါလာပါမယျ... အဲဒီထဲမှာ notepad လို့ရိုကျပွီး Enter ခေါကျလိုကျပါ..)
(Windows7သမားတွေအတွက်ကတော့ Boot တက်ပြီး Windows Install နားရောက်တဲ့အခါ Repair Computer ကိုရွေးပါ..
(Windows7သမားတှအေတှကျကတော့ Boot တကျပွီး Windows Install နားရောကျတဲ့အခါ Repair Computer ကိုရှေးပါ..
Recovery Option ရောက်တဲ့အခါ Use recovery tool ဘေးက အစက်လေးကို ရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ..
Recovery Option ရောကျတဲ့အခါ Use recovery tool ဘေးက အစကျလေးကို ရှေးပွီး Next ကိုနှိပျပါ..
နောက်ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ command prompt ကိုရွေးပါ..
နောကျပျေါလာတဲ့ Box မှာ command prompt ကိုရှေးပါ..
Command Prompt ပေါ်လာရင် notepad.exe လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ..)
Command Prompt ပျေါလာရငျ notepad.exe လို့ရိုကျထညျ့ပွီး Enter ခေါကျပါ..)
၃. ခုဆိုရင် Windows 10 သမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows7ပဲဖြစ်ဖြစ် Notepad ပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်.. Notepad အပေါ်တန်းက File ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး Open ကိုနှိပ်ပါ..
၃. ခုဆိုရငျ Windows 10 သမားပဲဖွဈဖွဈ၊ Windows7ပဲဖွဈဖွဈ Notepad ပှငျ့လာပွီဖွဈပါတယျ.. Notepad အပျေါတနျးက File ကိုတဈခကျြနှိပျပွီး Open ကိုနှိပျပါ..
၄.ပေါ်လာတဲ့ Open Box အောက်နားက File of Type မှာ All File ကိုရွေးပါ.. ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကို မြင်ရပါမယ်.. Windows တက်တုန်းကလိုပဲ Partition တွေကို မြင်နေရပါမယ်.. ကိုလိုချင်တာကို Copy ယူလိုက်ပါ..
(၄.ပျေါလာတဲ့ Open Box အောကျနားက File of Type မှာ All File ကိုရှေးပါ.. ပွီးရငျ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ဖိုငျကို မွငျရပါမယျ.. Windows တကျတုနျးကလိုပဲ Partition တှကေို မွငျနရေပါမယျ.. ကိုလိုခငျြတာကို Copy ယူလိုကျပါ..)
၅။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ် Backup ထားချင်တဲ့ အပိုင်းမှာ Paste ချပေးနိုင်ပါပြီ.. USB Stick တွေကိုလည်း Windows တက်စဉ်တုန်းကလို မြင်ရပါမယ်.. USB Stick ပေါ်ကို သိမ်းမလား၊ အခြား Partition တွေပေါ်မှာသိမ်းမလား အဆင်ပြေရာနေရာမှာ Backup လုပ် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါပြီ..
(၅။ ပွီးရငျတော့ ကိုယျ Backup ထားခငျြတဲ့ အပိုငျးမှာ Paste ခပြေးနိုငျပါပွီ.. USB Stick တှကေိုလညျး Windows တကျစဉျတုနျးကလို မွငျရပါမယျ.. USB Stick ပျေါကို သိမျးမလား၊ အခွား Partition တှပေျေါမှာသိမျးမလား အဆငျပွရောနရောမှာ Backup လုပျ သိမျးဆညျးနိုငျပါပွီ..)
Windows မတက်တော့အချိန်မှာ Data တွေ ဘယ်လို Backup လ...